Nnwom 55 NA-TWI - Adamfo a n’adamfo ayi no ama mpaebɔ - Bible Gateway
Nnwom 54Nnwom 56
Nnwom 55 Nkwa Asem (NA-TWI)
55 O Onyankopɔn, tie me mpaebɔ. Nnan wo ho nkyerɛ me nkotosrɛ! 2 Tie me na bua me! Me dadwene ama mabrɛ. 3 M’atamfo ahunahuna abɔ me hu na amumɔyɛfo nyadi abubu me. Wɔma ɔhaw ba me so; wɔn bo afuw me, na wɔtan me. 4 Mabɔ hu na owu ahunahuna abubu me. 5 Ehu ne ahopopo akyekyere me. Ahohuru afa me. 6 Sɛ mewɔ ntaban sɛ aburuburu a, anka metu akɔpɛ homebea akyirikyiri. 7 Anka metu akɔ akyirikyiri akɔkyekyere fi wɔ sare so. 8 Anka, ntɛm so, mɛpɛ hintabea afi mframa a ano yɛ den ne ahum ano.